कांग्रेसलाई सम्पूर्ण नेपालीको विश्वासयोग्य र भरोसायोग्य बनाउन क्षमतावान्, ऊर्जावान्, गतिशील र वैचारिक नेतृत्व चाहिन्छ ।
कार्तिक २०, २०७७ डिला संग्रौला
सात दशकभन्दा लामो संघर्षको इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेसलाई अलग्गै राखेर नेपालको राजनीतिक र सामाजिक अध्ययन अपुरो हुन्छ । प्रतिपक्षमा रहेका बेला हुन लागेको पार्टी महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेस पार्टी, देश र जनताको भविष्य निर्धारण गर्ने चुनौतीपूर्ण अभिभारा बोकेको छ ।
यो महाधिवेशनले पार्टीभित्रको व्यक्तिकेन्द्रित मतमतान्तरलाई निमिट्यान्न पार्दै समग्र पार्टी, समाज र देशका सामु उपस्थित चुनौतीलाई समाधान गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ । आजको आवश्यकता नेतृत्व चयन मात्र होइन, यसलाई लोकप्रिय पार्टी बनाउनु पनि हो । यसका लागि कांग्रेसको पुनर्जीवनको मार्गचित्र आवश्यक छ । कांग्रेसको मुख्य रोग हो– गुटबन्दी गर्नु, नीतिभन्दा नेतालाई महत्त्व दिनु, जनताको दैनिक समस्यालाई पर्याप्त ध्यान नदिनु, भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन नसक्नु, आत्मनिर्भर कार्यकर्ताको अभाव हुनु । नेपाली कांग्रेसको गौरव र गरिमा फर्काउन वैचारिक स्पष्टता, अवाञ्छित र अप्राकृतिक साँठगाँठलाई निरुत्साहन, नेता–कार्यकर्ताहरूमा ‘पार्टी बिग्रिए म पनि बिग्रिन्छु’ भन्ने भाव, नेताको सोझो गर्ने होइन पार्टी हितलाई प्रमुखता दिँदै नवीन सोच, संकल्प र प्रतिबद्धता लिनुपर्छ । कांग्रेस रूपान्तरणका लागि निम्न मार्गचित्रसहित अगाडि बढ्नुपर्छ–
स्पष्ट र प्रभावकारी नीति : कांग्रेसले २०१२ सालको वीरगन्ज महाधिवेशनदेखि नै समाजवादी अर्थनीति अँगालेको हो, नेपालको आधुनिक अर्थतन्त्रको अवधारणा र संरचनागत आधारशिला खडा गरेको हो । बीपी कोइरालाले उत्तरदायी शासनको धारणा अघि सार्दै ‘कोही पनि भोका, नाङ्गा वा निरक्षर नहोऊन्; देशमा सडक, बाटोघाटो, अस्पताललगायत जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउने अरू कुनै कुराको अभाव नरहोस्’ भन्ने दूरगामी लक्ष्य तय गर्नुभएको थियो । यसैलाई आत्मसात् गर्दै कांग्रेसले हाल कोरोनाले संकुचन पारेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न स्पष्ट नीति अवलम्बन गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोतजस्ता क्षेत्रको समुचित विकासमा जोड दिनुपर्छ ।
चुस्तदुरुस्त संगठन : पार्टी संरचनालाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउनु अर्को आवश्यकता हो । कुनै पनि राजनीतिक दलको निर्देशक सिद्धान्त मानिने राष्ट्रिय अखण्डता र एकता प्राप्त गर्न अख्तियार गरिने समग्र प्रक्रियागत स्वरूपलाई संगठन भनिन्छ, जसको एउटा अंग कांग्रेस हो । अनि कांग्रेसका अंगचाहिँ भ्रातृ र शुभेच्छुक संघसंगठन हुन् । मुलुकमा भएका सम्पूर्ण तह र तप्का, वर्ग र समुदायलाई परिचालन गर्ने क्षमता विकासका लागि संगठनको आवश्यकता पर्छ । नेतृत्वले भागबन्डाका आधारमा होइन, योग्य व्यक्तिलाई उपयुक्त ठाउँ दियो भने मात्र संगठन बलियो हुन्छ ।
भरोसायोग्य सक्षम नेतृत्व : पार्टीलाई नीति र विधिमा आधारित बनाएर अगाडि बढाउन भरोसायोग्य सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता छ । विधिको ब्याडमा नीतिको बिरुवा उम्रिनुपर्छ । भागबन्डाकै आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्दा असहमतिका स्वरहरू सतहमै पोखिएका छन् जसले गर्दा पार्टीभित्र वैमनस्य मौलाएको छ । पार्टीका होनहार र पुराना नेता–कार्यकर्ता ओझल पारिएका छन् । विधि र नीतिको अन्तरलाई मापन गर्न नेतृत्वमा ज्ञान, विवेक र दूरदर्शी सोचको आवश्यकता पर्छ । कांग्रेसलाई सम्पूर्ण नेपालीको विश्वासयोग्य र भरोसायोग्य बनाउन क्षमतावान्, ऊर्जावान्, गतिशील र वैचारिक नेतृत्व चाहिन्छ ।
जनमुखी एजेन्डाको सशक्त उठान : समयसापेक्ष एजेन्डाहरूकै कारण जनता कुनै पनि पार्टीप्रति आकर्षित हुने हुन् । त्यसैले कांग्रेस विकासमुखी, विपन्नमुखी, जनमुखी एजेन्डाको उठान गर्दै ‘निमुखालाई न्याय, विपन्नलाई आय’ को समाजवादी आदर्शअनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ । हालैको मलबीउको अभाव होस् वा विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको समस्या, पार्टीले समाधानका लागि सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ । जनताका दैनिक समस्याबारे सडक र सदन तताउनुपर्छ । अबको पाँच वर्षभित्र कांग्रेसलाई नवजीवन दिने कृषि क्रान्ति, ऊर्जा विकास, पर्यटन विकास, औद्योगिक विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, सडक सञ्जाल विस्तार, जलस्रोतको विकास, सुशासनद्वारा राष्ट्र निर्माण, खानेपानी, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा अग्रगामी कार्ययोजनासहित प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
निरन्तर प्रशिक्षण : पार्टीभित्र प्रशिक्षण, लेखपढ, छलफल, रचनात्मक बहसलाई प्राथमिकता दिइरहनुपर्छ । प्रशिक्षणले नै कार्यकर्तालाई कुशल वक्ता, बहसशिल्पी र प्रतिपक्षको भूमिका सक्षमतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने बनाउँछ । सही प्रशिक्षण हुन नसक्दा कार्यकर्ताको क्षमता विकास हुन पाएको छैन ।
प्रभावकारी सञ्चार : पार्टीलाई युगानुकूल परिवर्तन गर्न प्रभावकारी सञ्चारको आवश्यकता पर्छ । पार्टीको आन्तरिक र बाह्य जीवनमा सञ्चारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सञ्चारको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा पार्टीका धारणाहरू एवं शीर्ष नेतृत्वका अभिव्यक्तिहरू बेलाबखत विवादमा पर्ने गर्छन् ।
तटस्थ मतदाताकेन्द्रित कार्यक्रम : हरेक राजनीतिक दलमा दुई प्रकारका मतदाता हुन्छन्– पार्टीलाई सधैं मत दिइरहने अर्थात् वफादार र पार्टीको नीति हेरेर मात्र आकर्षित हुने अर्थात् तटस्थ । कांग्रेसले युवा, महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, विभिन्न पेसा–वर्गका जनसमुदायलाई आकर्षित गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम गरिरहनुपर्छ ।
मूल्याङ्कन र न्यायोचित व्यवस्थापन : गुट–उपगुटको अन्त्य गर्दै पार्टीलाई विधिवत् सामूहिक नेतृत्वका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ । पार्टीमा प्रत्येक कार्यकर्ताको योगदानको उचित मूल्याङ्कन गर्दै केन्द्रदेखि वडासम्मका सबै संरचनामा उनीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ । निर्वाचनमा टिकट दिँदा, पार्टीभित्रको संगठनको जिम्मेवारी दिँदा एवं अन्य ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति दिँदा मूल्याङ्कन पद्धति अपनाउनुपर्छ ।
सीमान्तीकृत वर्गसँग निकटता : आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक, शैक्षिक हिसाबले पछाडि पारिएका र राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका सीमान्तकृत, अपाङ्ग र गरिब जनतासँग निकट सम्बन्ध हुन जरुरी छ । व्यापारी, पुँजीपति र दलालसँग साँठगाँठ भयो भन्ने आरोपबाट कांग्रेस मुक्त हुनुपर्छ ।
चुस्त व्यवस्थापन : अहिलेको युग व्यवस्थापनको युग हो तर कांग्रेसमा व्यवस्थापकीय कमजोरी छ । पार्टीको नियमित कार्य सञ्चालन गर्न, निरन्तर ढंगले गतिविधि सञ्चालन गर्न चुस्त व्यवस्थापन चाहिन्छ ।
राम्रो कामको प्रचार : नेपाली कांग्रेस लामो समय सत्तामा रहेको पार्टी हो । यो मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, आर्थिक–सामाजिक संरचनाको विकास कांग्रेस सरकारकै पालामा भएको हो । तर त्यसको समयोचित प्रचार–प्रसार हुन सकेको छैन । सरकारमा रहेका बेला आफूले गरेका राम्रा कामको प्रचार नगर्ने, सधैं नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने, पार्टी अनुशासनविरुद्ध काम गर्नेलाई कारबाही नगर्ने शैलीलाई तिलाञ्जली दिनुपर्छ ।
भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको परिचालन : भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था नेपाली कांग्रेसको मेरुदण्ड र संगठनका आधारशिला हुन् । यिनीहरूको क्रियाशीलता, सशक्तता र मजबुतीबिना पार्टी मजबुत हुन सक्दैन । यिनलाई चलायनमान बनाउन विशेष कार्यनीति ल्याउनुपर्छ, विधानअनुसार क्रियाकलाप गर्न र समयमै अधिवेशन गर्न निर्देशन दिनुपर्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७७ ०८:१७
दल एकीकरणको टुकुटुकु
बंगालको खाडी र अरब सागरबीच संगम भए पनि ती लामो दूरीसम्म आआफ्नै धार र रङमा रहन्छन् ।
कार्तिक २०, २०७७ चन्द्रकिशोर
नेपालका राजनीतिक दल र एकीकरणबीच नङ–मासुको सम्बन्ध छ । नेकपा, नेपाली कांग्रेस, जसपा, राप्रपाका अंगहरू वा साझा र विवेकशील पार्टी सबै कि एकीकरण गरिसकेका कि त गर्ने तरखरमा छन् ।
दल एकीकरणका लागि गरिने हरेक प्रयत्नले आशा जगाउँछ, तर विश्वासको वातावरण बनाउने ठोस कार्यक्रमको अभावमा त्यस्ता उत्साहहरू केही दिनपछि स्वतः सेलाउँछन् । उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति तथा कार्यनीतिको उपलब्धिमूलक संयोजन हुन नसक्दा एकीकरणको यात्रा कतै पनि गतिशील बन्न सकेको छैन, दिशाहीन भइरहेको छ । चिन्ताको विषय, यतिन्जेलको समय त खेर गयो नै, आउने दिनमा पनि सुस्पष्ट बाटो कोरिने छाँट छैन । यद्यपि कतिपय दलहरू प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिका उपज हुन्, जनसंघर्षबाट अनुमोदित भएका हुन् र निरन्तर निर्वाचनको जनपरीक्षामा होमिँदै आएका पनि छन् । त्यसैले यी दलहरू बिग्रे–भत्के नै पनि बहुदलीय व्यवस्थाका प्रतीकचाहिँ हुन् ।
नेपालमा सिद्धान्ततः बहुदलीय व्यवस्था अपनाइएको भए पनि दलहरूको चरित्र निर्दलीय पाराको छ । सफल राजनीतिकर्मी मिहिनेती विक्रेता मात्र नभएर कुशल विक्रयी हुनु पनि जरुरी छ । दलपतिहरूको विक्रयी क्षमताले गर्दा नेपाली मतदाताले समयसमयमा एकपछि अर्काको जयगान गर्ने गरेका छन् । ‘एकीकरण भाष्य’ को प्रभावबाट यहाँको व्यामोहक समाज झन् मुक्त रहन सक्ने कुरै भएन । एकीकरणको जमर्को गर्ने नेतृत्वको सुरुसुरुमा महिमा मण्डन हुने गर्छ, तर समयान्तरमा त्यसले आफ्नो शक्ति ठम्याउन नसक्नाले रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्न पनि सक्दैन । एकीकरणपश्चात् प्रायः रचनात्मक खडेरी पर्दै जान्छ । अनि दलीय जीवनमा परिवर्तनको सम्भावना निस्तेज हुँदै जान्छ ।
नेपालमा दल एकीकरणको इतिहास दलहरूको उदयजत्तिकै पुरानो छ । बृहत्तर उद्देश्यप्राप्ति, अस्तित्वरक्षा, नेतृत्वविशेषको तात्कालिक स्वार्थ वा परिबन्द, बाह्य दबाब, स्थायी प्रतिगामी शक्तिको उत्प्रेरणा, साझा स्वार्थपूर्ति, चुनावी प्रतिस्पर्धामार्फत राज्य र यसका अंगहरूमा नियन्त्रण गरेर राज्यलाई पार्टी र नेता–कार्यकर्ताले भोग गर्न पाउने संगठित स्वार्थ, आर्थिक लेनदेन आदि एकीकरणका स्वार्थ रहने गरेका छन् । त्यसैले एकीकरणपश्चात् दलहरूमा शीर्ष नेतृत्वबीच महत्त्वाकांक्षा र व्यक्तित्वको टक्कर सुरु भइहाल्छ ।
दलपतिहरू शासन गर्ने अभिलाषाको प्रतिमूर्तिका रूपमा मात्र सीमित भएका छन् । दलपतिहरूले बेलाबखत गर्ने असफल प्रयोगबाट पाठ नसिक्ने हो भने मुलुकलाई राजनीतिक भुमरीबाट सुरक्षित बाहिर निकाल्न सकिँदैन । सबभन्दा ठूलो र पहिलो पाठ सत्ताको स्रोतसँग सम्बन्धित छ । दलको शक्ति भनेको सिद्धान्त र कार्यकर्ता हुन् भन्ने गुह्य दलपतिहरूले नबुझे पनि कार्यकर्ताहरूमा बुझपचाइ नहुनुपर्ने हो । दलपतिहरूलाई आखिर वैधानिकताको कित्ताभित्र राख्ने भनेको कार्यकर्ताहरूले अनुमोदन गर्ने मतपत्रले नै हो ।
घरका बर्तनहरू परस्पर जति जुधे पनि त्यसको ध्वनि छिमेकीका घर र गल्लीहरूसम्म नसुनिएकै बेस हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा दलहरूमा मात्र होइन, कतिपय मोर्चाहरूमा पनि विघटन र विभाजनको लामै तथा पट्यारलाग्दो इतिहास छ । दलहरूमा किन यो प्रवृत्ति देखिन्छ ?
फेरि किन एकीकरणको राजनीति फस्टाएको छ ? एकीकरणको भुमरीबाट उम्किने बाटो हुँदै नभएको होइन, तर त्यसका लागि दलहरूका ‘लर्ड’ अध्यक्षहरूले महत्त्वाकांक्षा कम र उदारता बढी देखाउनुपर्छ । वैदेशिक हस्तक्षेपका कारण पनि यदाकदा दलहरू जुट्ने वा भटाभट टुक्रिने गरेका छन् । दलहरूलाई ‘फुटाऊ र राज गर’ वा ‘घरझगडा भैरहे पञ्च बन्ने’ को सिकार बनाउन प्रयत्नशील छन् वैदेशिक शक्तिहरू । भनिन्छ, आफ्ना चाहनाहरू सावधानीपूर्वक रोज्नुपर्छ किनभने ती पूरा हुन सक्छन् । तर कम्प्युटरसँग बुद्धिचाल खेल्न माहिर खेलाडीहरू तार्किकता एवं विश्लेषणका आधारमा मात्र चाल चल्दैनन् । चुनावी राजनीति वा सत्ताभोगको लाभ–हानिभन्दा माथि उठेर इतिहासको पथ निर्माताका रूपमा प्रस्तुत हुने जिम्मेवारीबोधले राजनीतिकर्मीलाई राजनेता बनाउँछ । आज जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, थारू लगायतका आवाज गुञ्जायमान भइरहेका छन् । दमित अवस्थामा रहेका यी आवाजलाई उठ्ने अवसर प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रले नै दिलाएको हो । यस्तोमा दलहरूले पनि यसलाई लिएर छाती फराकिलो बनाउनुपर्ने हो, तर यस्ता मुद्दाहरू उठाएर ‘अर्घेल्याइँ’ गर्नेहरूलाई दलपतिले कालो सूचीमा राख्ने प्रवृत्ति छ । दलपतिबाहेकका नेता–कार्यकर्ताहरूले जब प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिको प्रभुत्वले प्राथमिकता पाएको माहोल पाउँछन्, त्यतिखेर मुद्दाभन्दा वफादारीमा आफ्नो भविष्य देख्न थाल्छन् । अहिले एकीकरण यात्रामा रहेका प्रायः दलहरूमा प्रक्रिया होइन, व्यक्तिको वर्चस्वको प्रश्न उठ्न थालेको छ । जब कोही दलपति आफूलाई विजेता र अर्को पक्षलाई युद्धबन्दी ठान्छन्, यस्तोमा एकीकरण नाफाको खेल मात्र रहन जान्छ ।
एकात्मक शासन पद्धति, दलविहीन र एकदलीय राज्य जनताको अभीष्ट होइन । लोकतन्त्रका पक्षमा दलहरूको संघर्षले जनतालाई अहिले पनि उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र, सामाजिक प्रतिनिधित्व र वैचारिक स्पष्टताको प्रक्रियाले दलपतिको व्यक्तिगत अभिलाषालाई नियन्त्रण गर्छ । राजनीतिशास्त्रीहरूको मतमा दल जनताको स्वतन्त्र इच्छा अभिव्यक्त गर्ने निकाय हो, आफैंमा वैधानिकताको स्रोत होइन । संसदीय व्यवस्था मानेको कुनै पनि लोकतान्त्रिक दलमा नेताहरूबीचको असहमतिलाई लिएर दल नै फुट्ने चिन्ता त झनै नहुनुपर्ने हो । घोडा रोज्ने हतारमा घोडेटो नै भत्किसकेको यथार्थलाई स्वीकार नगर्ने हो भने जुन सवारी रोजे पनि कहीँ पुगिँदैन, दौड उही वृत्ताकार सीमाभित्र मात्र घुमिरहन्छ । कुनै पनि दलको भित्री चाहना राष्ट्रिय रंगमञ्चमा आफ्नो उपस्थिति सबल रहोस् भन्ने नै हुन्छ । तर आन्तरिक रूपमा चुलिँदो अन्योल, द्विविधा र अव्यवस्था दलविशेषका लागि मात्र होइन, मुलुकको बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीका निम्ति पनि जोखिमपूर्ण छ । समाजमा बहुदलीयताको ‘स्पेस’ खुम्चिन नदिन पनि दलहरू सचेत हुनैपर्छ । भुइँ कार्यकर्ताले ‘शीर्ष नेताहरूले आफ्नो लाभका निम्ति मात्र एकता गरेको’ ठान्न थाल्नु भनेको सिद्धान्त, संगठन र नेतृत्व संक्रमणको लामो यात्रामा धकेलिनु हो ।
एकीकरणको प्रक्रियासँगै हातेमालो गर्न आएका पक्षहरू प्रायः कमजोर र संस्थापन कहलिने पक्ष बलियोको मनोविज्ञानमा हुन्छन् । संस्थापनले आफू संरक्षक रहेको हाउभाउ देखाउँछ । एकीकरणका बेला जतिसुकै ‘हामी मिसिएको होइन, अन्तर्घुलन भएका छौं; हिन्द महासागरमा गएर कहाँको पानी भनेर छुट्याउन सकिन्छ र ?’ भनिए पनि बंगालको खाडी र अरब सागरको संगम हुँदा ती लामो दूरीसम्म आआफ्नै धार र रङमा रहन्छन् । भिन्न विचारका पार्टी सत्ता र शक्तिको स्वार्थ मिल्दा मात्र एकीकरणको तुरूप फालिन्छ । जहाँ बहुअध्यक्ष छन्, त्यहाँ पनि बराबरी हैसियत राख्न खोज्ने तर आपसी दाउपेचमा संलग्न रहने, देखावटी रूपमा एकजुट हुने र भित्रभित्र एकअर्काविरुद्ध षड्यन्त्र बुन्ने कुटिल खेल चल्ने गर्छ । विधि र मापदण्डअनुसार पार्टी एकता कतै हुँदैन, भागबन्डाले प्रश्रय पाउँछ । एकीकरणको संक्रमणकालमा पानी धमिलो पार्ने गुटका नेताहरूले यसैमा आफ्नो फाइदा देख्छन् ।
एकीकरणको प्रयोग सफलै नभएको त होइन तर यसको भविष्य सन्देहरहित छैन र यसका केही कारण छन् । ती हुन्– एकीकरण भएका दलहरूभित्रका सबै पक्षमा स्वामित्वको अभाव, एकीकरणलाई प्रक्रियाभन्दा नेताविशेषको मोलमोलाइमा टुंग्याउने नराम्रो परिपाटी, कार्यकर्ता पंक्तिको अस्वाभाविक अपेक्षा, नेतृत्वको सामन्ती सोच, प्रक्रिया सञ्चालनका आधारभूत अवयवहरूको उपेक्षा, बाह्य शक्तिहरूको अह्रनखटन, बिचौलियाको दबाब । कतिपय अवस्थामा एकीकरण पार्टी भ्रष्टीकरणको आधार बन्न पुग्छ । दलको आन्तरिक लोकतन्त्र संस्थागत नगर्दा र कार्यकर्ता–हितैषी वृत्तलाई आलोचनात्मक नबनाइँदा एकीकरणको सांस्कृतिक मानस तयार हुँदैन ।
दलभित्र प्रक्रियाको विकल्पमा प्राविधिक संरचनाको वकालत गर्नेहरूले के बिर्सिने गरेका छन् भने, दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया रोकियो भने यो खतरनाक खेल धेरै दिन चल्न सक्दैन । लोकतन्त्रमा ‘दल’ निकै सुन्दर राजनीतिक उपहार हो । तर यो तबसम्म फगत यान्त्रिक संरचना रहिरहन्छ, जबसम्म स्वतन्त्र जनमतले यसको निगरानी गर्दैन ।
प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७७ ०८:१४